CAN 2019: Saaxiibayaal inta u dhaxaysa sugitaanka iyo nasashada ka hor inta aan la galin jeexitaanka - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »WAXAAD XASUUSKA: Saaxiibayaal u dhexeeya sugitaanka iyo nasashada ka hor inta aan la barbar dhigin
Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF) ayaa sii wadi doona isku aadka wareega ugu dambeeya Koobka qaramada Afrika ee soo socda (21 June-19 July July ee Masar), bishan April 12 ee ku yaala magaalada Giza. Tababarayaasha xulalka qualify ee 24 ayaa si xamaasad ah u sugaya xilligan marka ay ogaan doonaan halka, goorta iyo ka soo horjeeda dalalka ay ku ciyaari doonaan CAN 2019.
Wakiilka gaarka ah ee Qaahira,
Dunida yaryar ee kubadda cagta ee Afrika ee ku taala xeebta Gezirah Palace, oo ah dhisme dheraad ah oo lagu dhisay Qaahiro sannadihii 1860 oo ay ka mid noqdaan hoteel weyn. Tani waa halka ay Xarunta Xiriirka Kubadda Cagta Africa (CAF) ay xarun u aheyd xarunteeda Isku aadka Koobka Qaramada Afrika 2019.
Tababareyaasha xulka qaranka ayaa uqalantay finalka (21 June-19 July) inay ku raaxaystaan ​​jawiga aadka u degan, ee sugaya go'aanka. Khamiiskan, waxay leeyihiin xaafad lacag la'aan ah laakiin maskaxda ayaa wali qadarinaysa saamiga. " Shalayto, qabanqaabiyeyaashu waxay noo muujiyeen hudheelo kala duwan oo ay kooxaheenu sii joogi doonaan inta lagu guda jiro tartanka, iyo sidoo kale goobaha tababarkaayuu yiri macalinka kooxda Burundi Olivier Niyungeko. Maanta waa nasasho. Laakiin waxaa jira xiisad. Madaxaaga, waxaad la yaaban tahay qofka aad la kulmi doonto. Laakiin ilaa berri, waanu aamusnaa. Sidaa daraadeed waxaan tagnaa socod si aan u nasano ".
Qaarkood waxay wakhti badan ku qaataan berriga Qaahira Marriott Hotel. Qaar kale waxay door bidaan in ay isticmaalaan xarumaha isboortiga, sida Faransiiska Hervé Renard iyo Corentin Martins, oo ah macalimiinta kala ah Morocco iyo Mauritania. Waxaa jira kuwa jecel Sebastien Migné (Tababaraha Kenya) iyo Sebastien Desabre (Uganda) ka hadla diyaargarawga ugu fiican ee la sugi karo sugnaanshaha CAN ee 2019. " Had iyo jeer waa inaan si dhaqso ah u ogaanno marka aan bilaabi doono tartanka iyo kuwa aan ku ciyaareyno "Tilmaamaha mid ka mid ah kuwa madax ka ah" Cranes ". " Laakiin waxaan ku jirnaa cadaadis gaar ah. Waxaan sugeynaa barbarashada si aan u dhameystirno koorsada diyaarinta ", Waxaan ku soo gabagabeynayaa midkii jeclaan lahaa inuu ku kulmo magaalada Ismaaciiliya halkaas oo uu ku amarey naadiga xaafada (Ismaily).
Waqtigan xaadirka ah, tarbiyayaashu way yar yihiin sugitaanka. CAF ayaan weli ku dhawaaqin jadwalka cayaarta saxda ah ama jadwalka kulanka. Si kastaba ha noqotee, koofiyadaha ayaa kiciyay subaxnimadii Khamiista, si kastaba ha ahaatee, waxay ku egtahay ansaxinta Guddiga Fulinta ee Confederation.
Waxaa lagu soo waramayaa in lagu dhajiyay dheriga 2, DR Congo waxay kaliyoo qaddarin kartaa xaaladdaas. " Waa run in koofiyaddu ay ku yar tahay mudnaan (SIC), waxaa suurtagal ah in laga hortago qaar ka mid ah dadka ka soo horjeeda oo laga bilaabo bilawga Aqbalo Florent Ibenge. Laakiin macallinka "Leopards" ma jecla inuu ka fekero arrintan oo dhan: " Waxaan ogsoonahay inaysan jirin dalal yar. Waxaana halis ugu jirnaa in koox kasta ay la yaabto. Sidaa darteed waanu ku qanacsannahay waxa qaddarintu na siin doonto. »
Si kastaba ha noqotee, maaha dhamaanba falsafada, sida tababaraha Guinea ayaa sidoo kale ku jira koofida 2. " Ma sheegi karo inaan aamusnahayayaa ku dhoola-caydha Paul Paul Put, oo isku diyaarinaya inuu ku noolaado daabaciisa saddexaad, ka dib markii 2013 iyo 2015 la galeen Burkina Faso. Xaqiiqdii, marwalba waxaad haysataa rajo, ka hor inta aanad isku dhicin. Waxaad marwalba dooneysaa inaad ku dhacdo koox la ciyaaro. Laakiin markaad ku dhacdo koox dhimasho ah, marwalba way adag tahay ... Sidaas darteed, xitaa markaad horey u soo ciyaartay CAN, waxaad marwalba ku haysataa dareenkan. [...] Ma dhihi karo waxaan joogaa 100% dareen. Laakiin sugitaankani wax yar ayuu ciyaaraa ".
Halkan waxaa laga soo xigtey: http://afriquefoot.rfi.fr/20190411-can-2019-selectors- inta udhaxeysa sugitaanka-ka hor-fidinta